Umhla My Pet » Top US Cities for Women Single
Kukho izizathu ezithile ezenza indawo efanelekileyo kubafazi enye; kwiindawo kakhulu ukuba bahleli, imisebenzi wawungandibhatali kakuhle, ekhangela okulungileyo umdla guys enye, ukutya okunempilo ngokuqinisekileyo inxenye kubo. Imizi aba bafazi bakhetha ukuhlala kufuneka uninzi kwezo meko ukuba zonke. Uluhlu imizi phezulu US kwabasetyhini omnye uza kufumana ngezantsi sele zilungiselelwe ingqalelo uluhlu lwemiba.
1. Chicago: Apha, nabasetyhini kunandipha metropolis yokuphila ngokugqibeleleyo; oko isixeko esidlamkileyo ngokwenene, kodwa bezidla ngathi City New York. Chitown, njengoko abahlali emyoli jonga umzi njengoko, sixakeke ubuhle bendalo, inkcubeko kunye nembali. Wakube wena kulo mzi, uya kuyithiya nje ukuba uzakuwushiya; ke abazono kubumelwane trendy namanxweme qhele.
Ngoko ke, indlela elungileyo eChicago kanye kubafazi enye? Oprah Winfrey, abafazi abaninzi kuvuyiswane enye kulo mhlaba, uhlala apha; oku kufuneka ungqine ukuba isixeko umdla ngokwaneleyo ukuba baphile.
2. los Angeles: Ukuba ufuna ukunandipha ubomi ngokupheleleyo njengoko umfazi elinye, unokucinga abahlala Los Angeles. Lo mhlaba ezingaqondakaliyo izele ngabantu entle ngenkangeleko yaye bumba; ukuze, xa wena apha, ngokufumana umntu umdla zokudibana kunye akayi kuba yingxaki.
UNYE umdibanise enkulu isixeko iimeko zemozulu engaqhelekanga ngayo Uthanda yonke ngalo nyaka. kwemozulu Elilungileyo uya kukugcina ngomoya ophezulu kwaye uya kuba namandla ukwenza ixesha elininzi ufika emva kokuba umsebenzi. L.A. uya kuyenza yonke into ukususela abaye Celeb ukuya evenkileni ukuze ukubetha elunxwemeni.
3. Boston: abafazi enye ukufumana Boston esamkela nokuba qela lobudala bengabakho. kuba abafundi, Umzi lowo ezidumileyo kwiiyunivesithi apho Unokuwuqhawula ababhalise maxa. Ukuba nithanda ezivenkileni yaye usoloko ufuna ukunxiba into trendy, kukho Newbury Street, indawo egqibeleleyo ukuthenga iingubo umyili.
Ukuba ungomnye abo bamthandayo zizula kwaye wonwabe, Umzi lowo izitalato ezininzi imbali, kwiimyuziyam, iigalari, iiholo kunye neepaki.
4. San Diego: San Diego bekusoloko isixeko ukubamba ezinye iisayithi ezininzi ndijonge uya kuze ngaphaya. Ngoko ke, Ukuba utshatile kwaye ufuna ukuba ezinye amaxesha ezikholekileyo ebomini bakho, unokucinga ukufudukela San Diego.
Uqhekekile umzi engqongwe yi-Pacific Ocean, koozintlango nasezintabeni; ithetha ukuba, xa kufikwa kwiindawo ezifanelekileyo ukuya ukuthandana, kukho iinketho elaneleyo ukuba bakhethe. San Diego kwakhona likhaya Downtown ngokwenene kuxokozela.
5. Las Vegas: amathuba akho okufumana liqabane elifanelekileyo mhlawumbi yeyona iphezulu ukuba in Las Vegas. Ngokutsho 2013 Inqaku epapashwe kwi Forbes, lo mzi Nevadan lelona lamadoda olunye mfazi yonke enye abahlala kulo; ngokuba wonke umfazi elinye, Umzi lowo 1.34 amadoda. Olu phawu lomzi yenza Las Vegas le bafaka 5 kolu luhlu kwizixeko phezulu US kwabasetyhini enye.
Bonke abafazi phaya abangatshatanga kunye nocwangciso ukuhlala phantsi nayiphi izixeko ngasentla inene, uya kuba nobomi rocking.